အဆင့်အားလုံးအတွက် RGB Led နှင့် Arduino ပါသောစီမံကိန်း ၃ ခု အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ
Joaquín Garcia က Cobo | | Arduino
အီလက်ထရွန်းနစ်လောကတွင်စတင်လေ့လာသူတစ် ဦး သည်ပထမဆုံးသောပရောဂျက်တစ်ခုမှာမီးများနှင့်အထူးသဖြင့် LED များနှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤဒြပ်စင်၏လေ့လာရေးကွေးသည်အလွန်လွယ်ကူပြီးမိနစ်အနည်းငယ်ခန့်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြီးမားသောစီမံကိန်းများအတွက် smart lamps, light အချက်ပြမှု (သို့) verification element များစသည့်ကြီးသောအရာများကိုရရှိနိုင်သည်။
သို့သော်နောက်ပိုင်းတွင် အသုံးပြုသူများသည် RGB LEDs ကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုလေ့လာနေကြသည်။ ၎င်းသည်အလွန်လူကြိုက်များလာသည် များစွာသောစီမံကိန်းများအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါဘာလဲ? RGB Led diodes အသစ်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးနိုင်သောအကျော်ကြားဆုံးစီမံကိန်းများမှာအဘယ်နည်း။
1 RGB Led ဆိုတာဘာလဲ။
2 အဆုံးမဲ့ Led RGB Cube
3 လွယ်ကူသော LED RGB သင်္ကေတ
RGB Led ဆိုတာဘာလဲ။
LED တစ်ခုသည်အလင်းထုတ်လွှတ်သော diode တစ်ခုဖြစ်သည်။ မည်သည့်အီလက်ထရွန်နစ်ဘုတ်ဖြင့်မဆို၎င်းကိုတောင်မှစျေးသိပ်မကြီးသော၊ အသုံးပြုရလွယ်ကူသောကိရိယာ ၎င်း၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များမှာစွမ်းအင်နိမ့်ကျခြင်းနှင့် LEDs များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိရသောပုံစံအမျိုးမျိုးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုထွန်းလင်းစေသောရိုးရာမီးသီးများနှင့်မတူဘဲ \_ t LEDs များက၎င်းတို့ကိုအမျိုးမျိုးသောကိရိယာများတွင်သုံးရန်ခွင့်ပြုထားပြီး၊ ရိုးရာမီးသီးနှင့်ဝေးကွာသောအခြားပုံစံများကိုပင်ဖန်တီးနိုင်သည်။ အသုံး ၀ င်သော LEDs နာရီများသည်အခြား devices များထက်များစွာပိုမိုမြင့်မားသည်။ ထို့ကြောင့်မီးသီးတစ်လုံးအနေဖြင့်ဤအမျိုးအစားရှိဒိုင်одသည်ရိုးရာမီးလုံးများထက်နာရီပေါင်းများစွာအလင်းပိုပေးသည်; ဖန်သားပြင်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနှင့် LED pixel များသည်ပုံမှန် pixel ထက်သက်တမ်းပိုများသည်။ နည်းပညာကိုသုံးသောမတူညီသောကိရိယာများနှင့်အတူပါ။
သို့သော်ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် RGB အလင်းများ၊ လူကြိုက်များသောမီးများအကြောင်းပြောဆိုသွားမည်။ ဤအောင်မြင်မှုအတွက်အကြောင်းပြချက်မှာ၎င်းတို့သည်သာမန်မီးလုံးများအထက်တွင်ဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ LED diode သည်အရောင်တစ်မျိုးတည်းသာရှိသည်။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ diode ကိုမပြောင်းပါကကျွန်ုပ်တို့သည် device သို့ ပြောင်းလဲ၍ မရနိုင်ပါ။ RGB Led diode သည်အရောင်သုံးမျိုးဖြင့်အလင်းကိုထုတ်ပေးသည် - အနီရောင် (အနီရောင်)၊ အစိမ်း (အစိမ်း) နှင့်အပြာရောင် (အပြာရောင်) နှင့်သူတို့၏ပေါင်းစပ်မှုများဆိုလိုသည်မှာ diode ကိုပြောင်းလဲစရာမလိုဘဲအရောင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်နှစ်သက်စေနိုင်သည်။ RGB LED light ၏အောင်မြင်မှုသည် diode ကိုမသုံးပဲအလင်းအရောင်ကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ပရိုဂရမ်ဗဟုသုတကိုသာလိုအပ်သောအလွန်လက်တွေ့ကျသောအရာဖြစ်သည်။
အဆုံးမဲ့ Led RGB Cube
ဤစီမံကိန်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့အချိန်သို့မဟုတ်စက္ကန့်အနည်းငယ်တိုင်းတွင်ပြောင်းလဲနိုင်သောအရောင်များကိုထုတ်လုပ်သည်။ Infinite Led RGB Cube သည် light cube ဖြစ်ပြီး diode lamp တစ်ခုအဖြစ်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ နောက်ဆုံးရလဒ်သည် rgb led diode နှင့် Arduino တို့၏ပေါင်းစပ်မှုဖြစ်သည်။
၎င်း၏ဆောက်လုပ်ရေးသည် သငျသညျ 512 RGB Led diodes,6crystals, ကောင်းစွာဖြစ်နိုင်သည်တဲ့ microcontroller တွေလိုအပ်ပါတယ် Arduino UNO, diodes နှင့်ဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုလုံးကိုထောကျပံ့တဲ့အခြေစိုက်စခန်းပါဝါတစ်ခု cable ကိုသို့မဟုတ်ဘက်ထရီ။ ဤအရာကိုရရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့သည် diode များအားလုံးကိုပေါင်းစည်းရန်လိုအပ်သည်။ သို့မှသာ၎င်းတို့သည် Cube တစ်ခုဖန်တီးနိုင်မည်သို့မဟုတ် Cube ပုံသဏ္haveာန်ရှိသည်။ ဒီတည်ဆောက်ပုံတည်ဆောက်ခြင်းရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကတော့ diode ကို perpendicular အနေဖြင့် diode ၏ pin တစ်ချောင်းကိုအခြား pin နှင့်အတူထောင့်မှန်အောင်ဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ အချင်းချင်းဆက်သွယ်မှုမရှိပါက Cube ၏တစ်ဖက်တစ်ချက်ရှိလိမ့်မည်၊ သို့သော်၎င်းတို့အားလုံးသည် RGB led diode တစ်ခုနှင့်ကပ်လိမ့်မည်။
ငါတို့တည်ဆောက်ပုံအားလုံးပြီးပြီ။ ကျွန်တော်တို့ microcontroller board မှာကျန်နေသေးတဲ့ pins တွေကိုသုံးရမယ်။ ဒီအမှတ်မှာဒီ Cube ရဲ့ဘေးဘက်မှာ 8 x 8 diodes ရှိရမယ်။ 8 x 8 x 8 RGB LEDs ပါ ၀ င်တယ်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် cube မှလွှတ်လိုက်သော diodes ၏ pin များနှင့်ချိတ်ဆက်ကာ diode cube ကိုတဖြည်းဖြည်းနှင့်အရောင်အမျိုးမျိုးဖြင့်ဖွင့်ပေးသည့် program တစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ပေးသည်။ အရာအားလုံးကိုစုဆောင်းပြီးသည်နှင့်ကြွန်တော်တို့သည် crystals ကိုအသုံးပြုပြီး diodes ကိုကာကွယ်ပေးပြီးဖုံးအုပ်ပေးသော urn တစ်မျိုးမျိုးကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်ပါတယ်။ အခြေခံသည် diode cube သာမကကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးထားသော urn ကိုပါထောက်ပံ့ပါလိမ့်မည်။ Infinity Led RGB Cube ၏တည်ဆောက်မှုသည်အလွန်လွယ်ကူသော်လည်း၎င်းသည်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ သို့တိုင်, ၌တည်၏ ညွှန်ကြားချက် ၎င်းရဲ့ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်တစ်ဆင့်ချင်းလမ်းညွှန်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
လွယ်ကူသော LED RGB သင်္ကေတ
ဤစီမံကိန်းသည် ပိုမို၍ လူသိများပြီးအသုံး ၀ င်သော်လည်းယခင်စီမံကိန်းထက်တည်ဆောက်ရန် ပို၍ ခက်ခဲသည်။ Easy LED RGB Sign သည် diodes နှင့် Arduino တို့ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောအချက်အလက်များဖြစ်သည်။ ဒီပရောဂျက်အတွက် 510 RGB LEDs လိုအပ်တယ်။ ဒါမှမဟုတ်ဒီပုံစံအတိုင်းတူညီတဲ့ strips တွေပြောင်းလို့ရတယ်။ စိတ်ကူးက 10 x 51 LEDs ပါတဲ့စတုဂံတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးသော Easy LED RGB အမှတ်အသားအတွက်အထောက်အကူနှင့်ကာကွယ်ပေးမည့် acrylic စာရွက် ၃ လုံးလည်းလိုအပ်ပါလိမ့်မည်။3RGB LEDs၊ ဝါယာကြိုးလုပ်ရန်ကြိုးများ၊ ကဲ့သို့ microcontroller board များဖြစ်သည် Arduino UNO နှင့် diode နှင့် Arduino ဘုတ်ကိုပါဝါဖို့ဘက်ထရီ။
ပထမ ဦး စွာကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံကိုဖန်တီးပြီး diodes ပေါ်မှာထားရမယ်။ ငါတို့လိုချင်တာလုပ်နိုင်တယ်ဒါပေမယ့်ကောင်းတဲ့လှည့်ကွက်တစ်ခုကတော့ဒီအလင်းရောင်ကိုအထောက်အပံ့အနေနဲ့အဲဒီ acrylic စာရွက်တစ်ရွက်ကိုသုံးဖို့ပဲ။ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိပြီးနောက်ဆုံးရလဒ်အတွက်တန်ဖိုးမထားဘူး။ ပါးလွှာသော cable တစ်ခုဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် diodes များကိုထည့်ပြီး microcontroller သို့ဆက်သွယ်ပါ။ အရာအားလုံးကိုချိတ်ပြီးတာနဲ့ microcontroller ကိုဘက်ထရီနဲ့ချိတ်လိုက်ပြီ ဒီထဲမှာငါတို့လိုချင်တဲ့ပရိုဂရမ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးတယ်။ ပရိုဂရမ်သည်အောက်ပါလုပ်ဆောင်ချက်ကိုလုပ်ဆောင်လိမ့်မည် -
ဤအ diodes တစ်ခုချင်းစီသည်အချို့သောအရောင်များရှိလိမ့်မည်။
ရလဒ်မှာအချို့သောအခြေအနေများတွင်ကျွန်ုပ်တို့သုံးနိုင်သောအက္ခရာများ၊ သင်္ကေတများသို့မဟုတ်အချက်ပြမှုများကိုဖန်တီးခြင်းဖြစ်သည်။ Easy LED RGB Sign သည်အလွန်အသုံး ၀ င်သည့်အတွက်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောစီမံကိန်းဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်သော illuminated နိမိတ်လက္ခဏာကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုကတည်းက။ ကျနော်တို့က၎င်း၏ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်ရှိသည် အဆိုပါ Instructables repository ကို။ သို့သော်၎င်းသည်တံခါးပိတ်စီမံကိန်းတစ်ခုမဟုတ်ပါ ကျနော်တို့ diodes များ၏အရေအတွက်ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်သို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောအလုပ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် diodes ၏အလင်းကို execute သော program ကိုတိုက်ရိုက်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤ RGB LED သင်္ကေတနှင့် Arduino ကိုပေါင်းစပ်လိုက်လျှင်စမတ်ဆိုင်းဘုတ်များဖန်တီးနိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သင်္ကေတများကဲ့သို့ကွန်ပျူတာများနှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်းတို့ဖြင့်စွမ်းအင်တိုးလာသည်။
Led RGB Pixel Touch Table သည် Diode များကိုရိုးရှင်းသောဂိမ်းစားပွဲတစ်ခုအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲစေသောပျော်စရာစီမံကိန်းဖြစ်သည်။ ဤစီမံကိန်းသည်ယခင်စီမံကိန်းများထက် ပို၍ ခက်ခဲသော်လည်း၎င်း၏ဆောက်လုပ်ရေးသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ ထိတွေ့အာရုံခံကိရိယာ (သို့) IR အာရုံခံကိရိယာတွေကိုသုံးမှာဖြစ်လို့ဒီကိစ္စမှာ RGB နဲ့ Arduino LEDs တွေထက်ပေါင်းပြီးပေါင်းစပ်သွားမှာပါ။ ဒီအတွက်ငါတို့ကအောက်ပါပစ္စည်းများလိုအပ်လိမ့်မည်။
10 x 16 RGB LEDs တစ်ခု matrix ကို။
10 x 16 IR touch sensor များပါ ၀ င်သည်။
ဒေတာသိမ်းဆည်းရန် SD သို့မဟုတ် MicroSD ကဒ်။
ဘလူးတုသ် module ။
ဤကိစ္စတွင် ကျွန်ုပ်တို့ထိတွေ့အာရုံခံကိရိယာနှင့်ဒိုင်အိုဒက်၏ဆက်သွယ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအချပ်များ (သို့) သော့များကိုဖန်တီးရမည် ငါတို့စားပွဲနှင့်ကစားသောအခါငါတို့နှိပ်လိမ့်မည်ဟုထိန်းချုပ်မှုလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် panel ကိုထိမိလျှင်အလင်းထုတ်လွှတ်နိုင်လျှင် node တစ်ခုစီသည်သတင်းအချက်အလက်ကိုထုတ်လွှတ်နိုင်သည့်နည်းဖြင့်ဖြစ်သည်။ က) ဟုတ်တယ်၊ ဒီစားပွဲထရက်စ်၊ အမြင်အာရုံမှတ်ဉာဏ်ဂိမ်း၊ ဂန္ထဝင်မြွေတွေနဲ့ကစားလို့ရတယ်, ping-pong သို့မဟုတ်ရိုးရိုးကောင်တာတစ်ခုဖန်တီးပါ။ စုစုပေါင်းကျွန်ုပ်တို့တွင် nx ၁၆၀ ရှိပြီး ၁၀ x ၁၆ မက်ထရစ်ပုံစံဖြင့်ထားနိုင်သည်။
ကျနော်တို့ဒီ matrix ကိုစားပွဲ၏ဖန်ခွက်အောက်မှာထားပါလိမ့်မယ်။ စားပွဲ၏ဖန်ခွက်ကို acrylic ပလပ်စတစ်ကဲ့သို့သောပျော့ပြောင်းသည့်မျက်နှာပြင်ဖြင့်အစားထိုးရမည်။ ဒါကိုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်လုပ်တယ် ကျနော်တို့ကနှိပ်သည့်အခါအာရုံခံကိရိယာအလုပ်လုပ်တယ်။
အခုအရာအားလုံးကိုစုစည်းလိုက်ပြီ၊ ဒီ matrix ကိုသုံးပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့ program ကိုဖန်တီးရမယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Tetris သို့မဟုတ် "Simon" ၏ဂန္ထဝင်ဂိမ်းကဲ့သို့သောဂိမ်းများကိုသုံးနိုင်သည်။ ၎င်းကို microcontroller board ထဲသို့ထည့်ပြီး၎င်းနှင့် matrix ကိုဆက်သွယ်သည်။ ကြှနျုပျတို့ ... လုပျနိုငျပါတယျ ကျွန်ုပ်တို့သည် bluetooth အာရုံခံကိရိယာနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည့်ဘလူးတုစပီကာကျေးဇူးကြောင့်ဤစီမံကိန်းအတွက်အသံထည့်ပါ ကြောင်း microcontroller ကဘုတ်ရှိပါတယ်။
ဤ Led RGB Pixel Touch Table စီမံကိန်း၏အနှစ်ချုပ်ဖြစ်ပြီး၎င်း၏လမ်းညွှန်သည်ထင်ရသလောက်မလွယ်ကူပါ။ ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) များကိုဖန်တီးရန်အစီအစဉ်နှင့်လိုအပ်သောဆုံမှတ်ငယ်များဖန်တီးခြင်းလိုအပ်သည်။ ဂိမ်းဆော့ဝဲလ်နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဓိကအတွေးအခေါ်များနှင့်အဘယ်ရလဒ်ထွက်ပေါ်လာနိုင်ကြောင်းပြောဆိုလိုကြသည်။ သင်တို့မူကား၎င်း၏ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောလမ်းညွှန်ရှိသည် ဒီ link ကို.
ကျနော်တို့ RGB LEDs နှင့်အတူစီမံကိန်းသုံးခုအကြောင်းပြောခဲ့တယ် တည်ဆောက်ရန်လွယ်ကူပြီးစျေးသိပ်မကြီးတဲ့။ မင်းတို့များစွာသောငါတို့ diode အမြောက်အမြားကိုအသုံးပြုတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ခဲ့ပေမဲ့၊ ဒီအသစ်တွေရဲ့စျေးနှုန်းကအရမ်းနိမ့်တယ်၊ ဒါအရမ်းနိမ့်တဲ့အတွက် diode အရေအတွက်ကယူရို ၂ ဒေါ်လာသာကုန်ကျတယ်။ စီမံကိန်းအားလုံးတွင်သူတို့၏ထူးခြားချက်များနှင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ငါစီမံကိန်းအားလုံးလုပ်နေတာအကြံပြုပါသည်။ ပထမ ဦး စွာသူသည်အလင်း၏တုံးတည်ဆောက်လိမ့်မယ်, နောက်ပိုင်းတွင်သူသည် illuminated နိမိတ်လက္ခဏာကိုတည်ဆောက်ပြီးနောက်ဆုံးတွင်သူသည်ဂိမ်းစားပွဲကိုတည်ဆောက်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရိုးရှင်းသောစီမံကိန်းတစ်ခုမှ ပို၍ ခက်ခဲသောစီမံကိန်းတစ်ခုသို့သွားသောအခါပြီးစီးရန်အစီအစဉ်သည်အရေးကြီးသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ဤစီမံကိန်းသုံးခုကိုဆောက်လုပ်ပြီးသည့်နောက်တွင်ရလဒ်သည်အတူတူပင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဒိုင်အိုများကိုအသုံးပြုခြင်းကိုကျွမ်းကျင်လိမ့်မည်။ ပြီးတော့မင်းကို ဘယ်စီမံကိန်းကိုမင်းကြိုက်သလဲ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ » Arduino » RGB Led နှင့် Arduino နှင့်အတူစီမံကိန်း 3